Uzishaya isifuba ngamakhosikazi (15) - Ilanga News
Home Izindaba Uzishaya isifuba ngamakhosikazi (15)
Uzishaya isifuba ngamakhosikazi (15)
Kumanje unezingane eziwu-55 namakhosikazi awu-10 nezingoduso eziyisihlanu
NONHLAKANIPHO SHINGA noNOMFUNDO NGWANE
nezingane eziwu-60 noma eziwu-70 usoma-bhizinisi oyinyanga edumile waseMphelandaba, KwaMhlabuyalingana, uMnu James “Godolulalamankankane” Mthembu (57), okumanje unezi-ngane eziwu-55 namakhosikazi awu-10 nezingoduso eziwu-5.
neLANGA kwesinye sezithaba-thaba zomuzi wakhe, uMnu Mthembu uthi kawumsindi
nhlobo umndeni wakhe.
Uma ungena egcekeni lomunye wemizi yakhe ewu-6 – onesigodlo sakhe – okuhlala kuwona amakhosikazi awu-5 amadala, awubiza ngokuthi yikhaya elikhulu, ukhangwa yizingane ezincane ezicishe zilingane, athe zonke ngezesende lakhe.
Kwesinye isithabathaba esingekho kude nekhaya elikhulu, kuhlala amanye amakhosikazi awu-5 amancane, nezinye izinga-ne. UMnu Mthembu uthi amanye amakhosikazi akhe aneminyaka ewu-19, 20 no-21 ubudala.
UGodo, okuyigama akitazeka-yo uma ebizwa ngalo uMnu Mthembu njengoba nezimoto zakhe zibhalwe kanjalo, uthi isithembu sakhe sehluke kakhulu kwesijwayelekile njengoba kwaziwa ukuthi umama ngamunye uba nendlu yakhe, azipheke-le ekhishini lakhe nezingane zakhe.
Kwesakhe uthi linye ikhishi okuphekela kulona wonke ama-khosikazi akhe futhi nebhodwe okuphekwa ngalo liba linye, kudliwa ndawonye. Amakhosika-zi ayashintshana ngokupheka. Uthi isizathu sokuba apheke ndawonye wukuthi ugqugquzela ubumbano, kungabi nokuklwe-bhana egcekeni.
Ebuzwa ukuthi uwavakashela kanjani amakhosikazi akhe, uthe: “Ngiya kunoma ngubani engisuke ngifisa ukumvakashela ngalelo langa futhi uma sengiha-mba kuyena, kangimtsheli ukuthi ngizolala emzini kamasibanibani ngakusasa ngoba uma wenza njalo, lokho kuyawaqhatha.
“Enye inkosikazi ingaze igcine isiqaphela ukuthi uma uphuma kamasibanibani, ubuya ungenawo umdlandla, yingakho kumele angakwazi ukuthi uya nini kuwona, abone ngawe usufika. Ngenza isiqiniseko sokuthi uma ngiva-kashela inkosikazi emzini wayo, ngifike nginomdlandla owanele, ewudingayo ngaleso sikhathi,” kusho yena.
Ebuzwa ukuthi uyalithola ithuba lokuba alale yedwa aphumule njengoba enamakhosikazi amani-ngi, uthe impela uyalithola. Ubethi ekhuluma neLANGA kuthi uma kudlula inkosikazi yakhe, alitshele ukuthi ingeyesi-ngaki kulawa awu-10.
“Njengoba nginemizi emibili, nakulona omunye linye ibhodwe, amakhosikazi ami ayathandana futhi amanye angabangani,” kusho uMnu Mthembu ngokukhulu ukuziqhenya.
Okunye okuqaphelekayo ngamakhosikazi akhe, wukuthi akhululekile uma eseduze kwakhe. Uma exoxa wodwa aze abizane ngo-“O” axoxe aze ashayane izandla kuhle kwezelamani.
UMnu Mthembu ungusoma-bhizinisi ohlonishwayo endawe-ni njengoba engusomatekisi, enendawo yokucima ukoma neyokuwasha izimoto. Uthi ubenobizo lokuba ngumelaphi
wendabuko esemncane, okuho-lele ekubeni angasiqedi isikole.
“Ngino-Standard 1, ngehluleka wukuhlala esikoleni, kodwa kayi-kho into engingenayo empilweni ngoba isiphiwo sami engasiphiwa ngabakithi abangasekho,
ngisisebenzisa ngendlela okuyiyona,” kusho yena.
Egcekeni lakwakhe kume izi-ngadlangadla zezimoto okukhona kuzona iToyota Dakar, yiToyota Fortuner namaToyota Quantum awu-5 – ashayelwa ngabafana bakhe – namaloli athutha izimpahla.
“Ebhizinisini lami kusebenza izingane zami ngoba yizona okumele zifunde ibhizinisi ukuze kuthi mhla ngidlula emhlabeni, zikwazi ukubheka ikhaya.
“Wonke amatekisi ami ashaye-lwa ngabafana bami kuthi ama-ntombazane amanye asebenze ezitolo, kanti inkosikazi yami yesibili, uMaZungu, nayo eyisa-ngoma, yengamele amabhizinisi, umsebenzi wami wokwelapha nokunye,” kusho yena.
Uthe esakhuluma wangena uMaZungu, wabingelela ngoku-khophoza, emamatheka, ebuka umyeni wakhe. “Biza abanye omama sizoshutha sonke, kukhona izintatheli,” kusho yena.
UMaZungu usuke ngokukhulu ukuzithoba eyobiza abanakwabo ezindlini zabo. Ngaphandle kokuba ngusomabhizinisi nomelaphi, uMnu Mthembu uzokhu-mbuleka ngomkhankaso wakhe wokulwa nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu abanebala elimhlophe KwaMhlabuyali-ngana.
Wayengomunye wababepha-mbili emibhikishweni ngesikha-thi kubulawe intombazanyana enguThandazile Mpunzi, enebala elimhlophe ngo-2015. Ngo-2016 wasiza kwabanjwa owesifazane owayedayisa izingane ezintathu ezinebala elimhlophe.
“Mina nginabantu okuyimanje babhadla emajele ngoba ngiba-bophisile ngemuva kokuzama ukungidayisela izicubu, okuyinto engilwa nayo ngandlela zonke.
“Kubalulekile ukuba kube yithina belaphi bendabuko abahamba phambili ekulweni nalesi sihlava ngoba kakukhona ukwelapha ukubulala umuntu ngenxa yebala lakhe, kepha kuwuku-khohlakala nokuthakatha nje,” kusho yena.
Uthi kuyena kuke kwafika ngisho owesifazane obephethe izicubu ezomdayisela zona, wavele wabiza amaphoyisa ngaleso sikhathi.
“Kuyimanje lowo wesifazane uhamba lelo cala, ngiyaziwa ukuthi kakudlalelwa kimina uma kukhulunywa ngalabo bantu. Emsebenzini engiwenzayo
kangisebenzi ngokuba kuchithwe igazi labantu,” kusho yena.
Okuxakayo ngoGodo wukuthi yize enabantwana abaningi, kodwa uma umbuza ukuthi owo-kugcina uneminyaka emingaki, usho kahle ukuthi akekho owo-kugcina, kwazise kuhlale kukhona owesifazane ozithwele
“Kuyimanje nje njengoba sikhuluma, bekukhona abanye abafikayo bephuma emtholampilo kade beyoxukuza,” kusho yena ehleka.
Uthi ezinhlelweni zakhe uhlela ukwenza indumezulu yomshado, eshada nawo wonke amakho-sikazi akhe sekuhlangene nezi-ngoduso zakhe, benze umshado omhlophe.
Previous articleBazodlisela ngamanoni akudala kwimpucuzeko
Next articleUkhala ngokuphucwa izisebenzi